I-Israel iyaqhubeka nokubahlwitha iWest Bank abasePalestine - Bayede News
I-Israel iyaqhubeka nokubahlwitha iWest Bank abasePalestine
Bathi banqobele umqeqeshi uchungechunge
Umbutho wempi wakwa-Israeli usushaqe wadiliza imizi engama-153 yabasePalestine eWest Bank naseMpumalanga yeJerusalem. Inyanga uNhlolanja kube ngenezigameko ezinkulu zokudilizwa kwezindlu eWestbank selokhu i-Israel yakuqala ukukwenza lokhu ngowezi-2009.
Ihhovisi iCoordination of Humanitarian Affairs in the Palestinian Territories (OCHA) lenhlangano yamazwe omhlaba i-United Nations (UN) lidedele umbiko ngoLwesibili othi ukuziphatha kwe-Israel eWest Bank kule nyanga eyedlule kushiye abantu abangama-305 bengenamakhaya, kubalwa nezingane ezingama-172.
Abangama-435 balahlekelwe indlela yokuziphilisa nokusondelana nezidingongqangi ezifana nemitholampilo. I-OCHA iphinde ibika ukuthi selokhu kuqale owezi-2021, imali abantu basePalestine asebeziphilisa ngayo ngenyanga seyehlele kumasenti angama-65. I-Israel ayikwamukeli ukusolwa kulokhu.
Ithi ngokwazi kwayo le mizi yayivele yakhiwe ngokungekho emthethweni njengoba nabebehlala kuyo behlulekile ukuveza amatayitela nezimvume uma bewafuna. IPalestine yona ngokuvunwa izinhlangano ezilwela amalungelo abantu kanye ne-UN ithi i-Israel yenza kube nzima ukuthi abantu bathole izimvume namatayitela. Leli lizwe lisola ukuthi i-Israel ikwenza lokhu ngenhloso yokubavimba ukuthi bakhe ekubeni umhlaba kungowabo.
I-OCHA ithi zicelela kwangama-90% izakhiwo i-Israel eyazidiliza ngoNhlolanja e-Area C ngaphandle kwesexwayiso. Ungamaphesenti angama-60 umhlaba wakule ndawo osugwamandwe i-Israel kanti leli lizwe alihlosile ukugcina kulesi sibalo.
Ngokomthetho leli lizwe elazakhela wona, akuphoqi ukuthi ixwayise kuqala uma lifuna ukushaqa, ukudiliza okanye ukubiyela indawo eWest Bank. Lokhu kube sekuphuca labo asebenezakhiwo ithuba lokuthi baveze izimvumo kuqala ngaphambi kokudlelwa nokudilizelwa izakhiwo.
UHulumeni wakuleli lizwe awukufihlile ukuthi uhlose ukuyithatha yonke iWest Bank njengengxenye yeqhinga ukutholela abantu bawo umhlaba osushoda ngenxa yokwanda kwabantu.
Lolu hlelo lokudiliza laleli lizwe selukhule ngamandla selokhu kuqale unyaka njengoba sekudilizwa nalezi zakhiwo ezazinikelwe izinhlangano ezilekelela abahlwempu, lezi zinhlangano besezakhe izakhiwo ezingama-93 selokhu uqalile unyaka okuyisivinini esihle uma kuqhathaniswa nezingama-157 ezakhiwa nyakenye.
Kuphinda kuyavela nokuthi kuneziqhwaga ezivela kuleli lizwe esezigwamande imali engama-$3,000 esikhwameni esashiywa yilezi zinhlangano zishiyela abantu basePalestine asebaphenduka ondinga sithebeni ngenxa yokuzingelwa uHulumeni wakwa-Israel. Imibiko iyakuveza ukuthi ukuphucwa nokudilizwa kwezakhiwo kwakamuva kugxile kakhulu esigodini iHumsa al-Bqaia.
Ukukhoseliswa kwabaseHong Kong yiBritain kunyusa ubutha bayo neChina
Bali-100 abantu basePalestine abahlala kule ndawo. Ukudiliza kwenzeke izikhathi ezinhlanu enyangeni eyedlule kule ndawo iHumsa al-Bqaia. Izinhlangano ezakha kule ndawo sezikhalela ukuthi zasebenzisa okungenani imali engama-$51,000 okumanje osushatshalaliswa kalula. Ekuqaleni kwale nyanga inhlangano elwela amalungelo abantu engaphansi kwe-UN iyalele i-Israel ukuthi iphume iphele eHumsa al-Bqaia ixwayisa ngokuthi lesi senzo sifaka ingcindezi kubantu abavele baphila ngaphansi kwayo futhi asebephila ngokukhangezwa.
I-Israel ithi izakhiwo kule ndawo zisitha umbutho wokuvikela kuleli lizwe okungase kunikeze izitha ithuba lokubanyonyobela. Leli lizwe selijwayele ukusebenzisa le ncazelo uma lidiliza ePalestine kanti i-UN ithi ayamukelekile ngoba ibhebhethekisa usizi kubantu abangenze lutho.
Umbiko wale nhlangano uthi: “Abantu abangokufika kwelinye izwe abakwazi ukusebenzisa umhlaba wakulelo lizwe ukulolonga umbutho wezempi ngaphandle kwencazelo eyamukelekile. Siyazi ukuthi i-Israel inenqwaba yezikhungo zokulolonga imibutho yempi ngaphakathi kwemingcele yayo.”
NgoLwesibili zingama-23 womabili lawa mazwe, i-Israel nePalestine, anokhetho lokuqoka ubuholi obusha. Akungabazeki ukuthi lokhu okwenzakalayo kuzoba nomthelela emikhankasweni yokhetho njengoba uNdunankulu uBenjamin Netanyahu okuvunayo lokhu ehlela ukubuya ihlandla lesikhombisa kulesi sikhundla.
nguNtobeko Shozi Mar 19, 2021